यस्तो छ आज बिदेशी पैसाको मूल्य, कुन देशको कति ? (सुचीसहित) – जलजला अनलाइन
Posted on February 10, 2019 Author Comments Off on यस्तो छ आज बिदेशी पैसाको मूल्य, कुन देशको कति ? (सुचीसहित)
माघ २७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले (माघ २७) लागि एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११३ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य ११४ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ ।
एक युरोको खरिददर १२९ रुपैयाँ ०४ पैसा छ भने बिक्रिदर १२९ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रिदर १४८ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ । यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर १० रुपैयाँ ३६ पैसा छ भने बिक्रिदर १० रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।
कतारी एक रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ । यसैगरी कुवेती एक दिनारको खरिददर ३७४ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रिदर ३७६ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ ।
नेपालमै पहिलोपटक बुद्ध एयरले गर्यो यस्तो घोषणा
असोज २४, काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक उडानमा अग्रणी निजी क्षेत्रको हवाई सेवाप्रदायक बुद्ध एयरले पब्लिक कम्पनीमा जाने घोषणा गरेको छ। निजी कम्पनीका रूपमा रहेर आन्तरिक र क्षेत्रीय उडान गरिरहेको एयरलाइन्सले अबको ३ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त्यहाँबाट उडान सुरु गर्ने एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय […]
एस्तो छ दाङको रक्षाचौरमा सौर्य उर्जा प्रणाली मार्फत खानेपानी ल्याउने तयारी
मंसीर १९, दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ४ रक्षाचौरमा सौर्य उर्जा प्रणाली मार्फत खानेपानी ल्याउने तयारी भएको छ । विगत लामो समय देखि त्यस क्षेत्रका गणेस टोल, शान्ती टोल लगाएत अन्य टोलका नागरिकहरुले खानेपानीको समस्या झल्दै आएको भन्दै उक्त योजनालाई अघि सारिएको हो । पातुखोलाबाट सोलार लिप्ट पम्प मार्फत त्यहा खानेपानी पु¥याईने भएको […]